စျေးပေါသော OBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါသော OBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
နေအိမ် > စျေးပေါသော OBB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါတဲ့ OBB ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် OBB ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် OBB
2. OBB အကြောင်း 3. စျေးပေါသော OBB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. OBB လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့် OBB ရထားစီးတာပိုကောင်းသလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, သက်တောင့်သက်သာ, OBB အပေါ်နှင့် Sparschiene 7. OBB subscription ရှိပါသလား
8. ဘယ်လောက်ကြာ OBB ၏ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ 9. OBB ရထားဇယားကဘာလဲ
10. မည်သည့်ဘူတာများကို OBB မှတာဝန်ယူသည် 11. OBB မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် OBB
အချိန်တိကျမှုနှုန်းဖြင့် 96%, OBB (တစ်ခါတစ်ရံ OEBB ကိုခေါ်) ရထားသည်ဥရောပတွင်အများဆုံးသောရထားလမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, OBB ကြာပါသည် 447 လူ ဦး ရေသန်းနှင့် 105 ကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန်သန်းပေါင်းများစွာသည်သြစတြီးယားနှင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်.
OBB သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်, နှင့် 100% သူတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအားလုံးသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှဖြစ်သည်.
OBB, သြစတြီးယားဖက်ဒရယ်မီးရထား, သြစတြီးယားဖက်ဒရယ်မီးရထားလမ်းအတွက်နောက်ထပ်အမည်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက 1923, OBB သည်သြစတြေးလျားနိုင်ငံသားများအတွက်မိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်. မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဥရောပ၌ကြောင်းပြသခဲ့သည်, OBB သည်အချိန်တိကျမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ယုံကြည်စိတ်ချရ, နှင့်ကြိမ်နှုန်း.
OBB ကမ်းလှမ်းသည် သြစတြီးယားအတွင်းရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ဥရောပတစ်လွှား. လက်ျာလက်မှတ်နှင့်အတူ, သငျသညျအပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဥရောပမှာအားလပ်ရက်နေရာများ. လက်မှတ်အမျိုးအစားများနှင့်ကဒ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအမျိုးအစားများနှင့်အတူ, OBB သည်လူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်.
OBB သည်ဗီယင်နာကိုမကြာခဏလေ့ကျင့်သည် – Graz, Salzburg – ဗီယင်နာ, Linz – စိန့်. ဝတ်မှုန်, Graz - Salzburg. OBB ရထားဖြင့်ဥရောပအတွင်းရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်းသင်သွားနိုင်သည်.
ကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖြတ်ပြီး, 41,904 ရထားလမ်းနှင့်ဘတ်စ်ကားကွန်ယက်များတွင်အလုပ်လုပ်ဝန်ထမ်းများ (အပေါင်းထပ် 2,000 အလုပ်သင်) အချို့ကိုသေချာစေပါ 1.3 သန်းနဲ့ချီတဲ့ခရီးသည်တွေဟာနေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဘေးကင်းစွာရောက်ရှိနိုင်ပြီ.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ OBB အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်
စျေးပေါသော OBB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ OBB လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာထားပါ
စျေးနှုန်း OBB ရထားလက်မှတ်တွေ ခရီးသွားသည့်နေ့နီးသည်နှင့်အမျှထတတ်သည်. သင် OBB ရထားလက်မှတ်များကိုကြိုတင်ထွက်ခွာသည့် နေ့မှစ၍ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ငွေစုဆောင်းနိုင်သည်. OBB ရထားလက်မှတ်များကိုစောစောစီးစီးရနိုင်သည်3သို့6ရထားထွက်ခွာသွား၏လပေါင်းများစွာ. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင်သည်အသက်သာဆုံး OBB ရထားလက်မှတ်ရရန်သေချာစေသည်. သူတို့ကအစအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်, ဒါကြောင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်စာအုပ်ဆိုင်, မင်းအတွက်စျေးသက်သာတယ်. OBB ရထားလက်မှတ်ပေါ်တွင်ငွေစုရန်, သင့်လက်မှတ်ကိုစောစောဝယ်ပါ.
ဂဏန်း 2: အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း OBB ဖြင့်ခရီးသွားခြင်း
OBB ရထားလက်မှတ်တွေက အဆိုပါ Off- အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းချိုသာ, တစ်ပတ်၏အစမှာ, နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. သင်ရရန်သေချာပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း. အင်္ဂါနေ့မှာ, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, OBB ရထားလက်မှတ်သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နံနက်ခင်းနှင့်ညနေခင်းများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခရီးသွားလာသောစီးပွားရေးသမားများကြောင့်ဖြစ်သည်, ရထားလက်မှတ်တွေကပိုကုန်ကျတယ်. ဒါဟာမနက်နှင့်ညနေခင်းအသွားအပြန်အကြားအချိန်မရွေးခရီးသွားရန်ဝေးစျေးနှုန်းချိုသာသည်. တနင်္ဂနွေသည်ရထားများအတွက်အခြားအထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့များတွင်ဖြစ်သည်. OBB ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လာသည် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ.
ဂဏန်း 3: သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားသေချာသည်နှင့် OBB အတွက်သင်၏လက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
OBB ရထားများ မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်အနည်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူ, ၎င်းတို့သည်သြစတြီးယားရှိရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးစီးပွါးရေးလက်မှတ်မဟုတ်ရင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းမယ်လို. သင်လက်မှတ်များကိုလူများအားရောင်းနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိနေသေးသော်လည်း, လက်မှတ်ရောင်းအားကို OBB မှခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ဂဏန်း 4: သင်၏ ABB လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
ရထားကိုသိမ်းဆည်းပါအကြီးဆုံးရှိသည်, အကောင်းဆုံး, နှင့်ဥရောပရထားလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအပေးအယူ. များစွာသောမီးရထားအော်ပရေတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှု, ရထားလက်မှတ်အရင်းအမြစ်များ, နှင့်နည်းပညာ algorithms ငါတို့၏အသိပညာကျွန်တော်တို့ကိုစျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်အရောင်းအမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး. OBB တစ် ဦး တည်းအတွက်စျေးသက်သာတဲ့ရထားလက်မှတ်ဝယ်လို့မရ; ကျနော်တို့ OBB မှအခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်တူညီသည်.
OBB လက်မှတ်သည်ရထားတစ်စီးတည်းအတွက်ယူရို ၁.၅ မှ ၅၁ အထိအမြင့်အထိရှိသည်. အဆိုပါ OBB ရထားလက်မှတ်၏စျေးနှုန်း သင်ဝယ်ယူသည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့်သင်ခရီးသွားရန်ရွေးချယ်သည့်အခါပေါ်တွင်မူတည်သည်:
စံ € 1,50 – € 51 € 2,40 – € ၁၀၀
ပထမတန်း € 1,50 – € 51 € 2,40 – € ၁၀၀
ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့် OBB ရထားစီးတာပိုကောင်းသလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
1) သင်မြို့လယ်ခေါင်သို့ရောက်. ၎င်းသည်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် OBB ရထား၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. OBB ရထားများနှင့်အခြားရထားများသည်မြို့၏မည်သည့်နေရာမှမဆိုလာမည့်မြို့လယ်သို့သွားသည်. လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိအချိန်အတော်အသင့်သက်သာစေတယ်. ရထားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, သင်သွားလိုသည့်မြို့၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်. သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ, မြူးနစ်, Salzburg, Linz, သို့မဟုတ် Cologne, မြို့လယ်ခေါင်သည် OBB ရထား၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်!
2) လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးနှင်ရန်သင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီအနည်းဆုံးနာရီပေါင်းများစွာလေဆိပ်သို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည်. လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကိုသင်လုပ်ရလိမ့်မည်. OBB ရထားနှင့်အတူ, သင်ရုံကြိုတင်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းဘူတာရုံမှာဖြစ်ဖို့ရှိသည်. သင်အချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားသောအခါလေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရန်အချိန်ယူရသည်, သင် OBB ရထားစုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်.
3) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, OBB မီးရထားလက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်းသည်ဘတ်ဂျက်လေယာဉ်လက်မှတ်များထက် ပို၍ ကုန်ကျသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးစွဲချက်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, OBB ရထားလက်မှတ်တွေမှာစျေးပိုကောင်းတယ်. ရထားစီးရန်မလိုသောခရီးဆောင်အိတ်များကဲ့သို့အခြားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူ, OBB အားဖြင့်ခရီးသွားလာ အကောင်းဆုံး.
4) ရထားများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေသည်. ရထားနှင့်လေယာဉ်ပျံအကြားနှိုင်းယှဉ်ပါ, ရထားထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်. လေယာဉ်များသည်၎င်းတို့စွန့်လွှတ်လိုက်သောကာဗွန်ဓာတ်များနှင့်အတူလေထုကိုအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းစေသည်. နှိုင်းယှဉ်ရထားထွက်ပေးပါ ကာဗွန် 20X အငယျဆုံးသော လေယာဉ်ထက်.
Munich မှ Innsbruck လက်မှတ်တွေ
Salzburg မှ Innsbruck လက်မှတ်များ
Oberstdorf မှ Innsbruck လက်မှတ်များ
Graz မှ Innsbruck လက်မှတ်များ
Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, သက်တောင့်သက်သာ, OBB အပေါ်နှင့် Sparschiene?
OBB တွင်မတူညီသောဘတ်ဂျက်နှင့်ခရီးသွားအမျိုးအစားများအတွက်လက်မှတ်အမျိုးအစားများရှိသည်: ဒါကြောင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပန်းဖြေခြင်းရှိမရှိ. ဒီလက်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုကသင့်တော်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်.
စံ OBB လက်မှတ်တွေ:
ပုံမှန်လက်မှတ်သည် OBB ကမ်းလှမ်းသောအပြောင်းလွယ်ဆုံးရထားလက်မှတ်ဖြစ်သည်. သင်တိုတောင်းသောအသိပေးစာအပေါ်ခရီးသွားရန်ရှိပါက, သင်ဒီလက်မှတ်ရသင့်တယ်. သင်တစ် ဦး အထူးရထားမှကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်, သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်. OBB ရဲ့စံလက်မှတ်များအတွက်တရားဝင်သည်2မည်သို့ပင်လမ်းကြောင်းနှင့်ဝယ်ယူလမ်းကြောင်း၏မသက်ဆိုင်ဘဲမူလ. ပုံမှန်လက်မှတ်များအားတရားဝင်သက်တမ်းပထမနေ့မတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်အခမဲ့ပြန်လည်ပေးချေနိုင်သည်. အွန်လိုင်းဒီလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့အခါ, ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်တရားဝင်မှုအတွက်အထူးညွှန်ကြားချက်များရှိပါသည်.
OBB Komfort လက်မှတ်သည်ပုံမှန် OBB လက်မှတ်ဖြစ်သည်, သူတို့အဘို့အကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ညရထားမှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုများ. OBB Komfort လက်မှတ်သည်ခရီးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်, ရွေးချယ်ထားခရီးသွားအမျိုးအစားအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထား, နှင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းထဲမှာနံနက်စာ.
စံလက်မှတ်နှင့်မတူသည်, အဆိုပါ Komfort လက်မှတ်မှာအားလုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ပါဘူး. ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်ရထားတစ်ခုအတွက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်. သင်ဤလက်မှတ်ကိုဖုံးလွှမ်းသည့်လမ်းကြောင်းမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်လက်မှတ်အသစ်တစ်ခုရရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
ငွေကြေးပြန်လည်သည်, OBB ၏ Komfort လက်မှတ်များကိုလည်းအခမဲ့ငွေပြန်အမ်းပေးသည် 15 တရားဝင်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့မှရက်ပေါင်း. အပြီး 15 နေ့အမှတ်အသား, Komfort လက်မှတ်များကိုငွေပြန်အမ်းမည် 50% မူရင်းစျေးနှုန်း၏.
OBB Sparschiene လက်မှတ်များ:
အပြင်က စံလက်မှတ်နှင့် Komfort လက်မှတ်, OBB သည် Sparschiene လက်မှတ်ဟုလူသိများသည့်အခြားလက်မှတ်များကိုပေးသည်. ဒီအကွာအဝေးစျေးပေါသည်နှင့်နိမ့်ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားများအတွက်. Sparschiene လက်မှတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်.
OBB subscription ရှိပါသလား?
ဒေသခံနိုင်ငံသားများအတွက်, subscriptions နှစ်ခုအမျိုးအစားများရှိပါတယ်, အဆိုပါ Vorteilscard နှင့် Osterreichcard. နိုင်ငံတကာအတွက်တော့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုတင်ပြီး ၀ ယ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်.
Vorteilscard Classic ကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်: (ဒေသခံနိုင်ငံသားများက၊ 45% ထံမှလက်မှတ်ကို ၀ ယ်သောခရီးသည်များအတွက်ပုံမှန်လက်မှတ်တစ်ခုအတွက်အထူးလျှော့စျေး)
– OBB လက်မှတ်ကောင်တာများ.
– အဆိုပါ OBB ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာ 05-1717
– OBB ရထားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများမှဝန်ထမ်းများမှ.
တစ်ခု Osterreichcard ဂန္ထဝင်နှင့်အတူ, သင်တစ် ဦး အပိုဆောင်း Self- ဘွတ်ကင်လျှော့စျေးရရှိပါလိမ့်မယ် 5% ထံမှလက်မှတ်ဝယ်ယူသောအခါခရီးသည်များအတွက်စံတစ်ခုတည်းလက်မှတ်ပေါ်မှာ:
– ရထားဘူတာတွင် OBB လက်မှတ်အရောင်းစက်.
အသက်ခရီးသည်များ 15 ထပ်မံ၍ Vorteilscard မိသားစုကို ၀ ယ်နိုင်သည်. ဒီကဒ်သည်ဓာတ်ပုံမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်အတူတရားဝင်သည်, အရာကိုင်ဆောင်သူရဲ့အသက်အရွယ်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ. ဒီလက်မှတ်နှင့်အတူ, သင် OBB ရထားအားလုံးမှာခရီးသွားနိုင်ပါတယ်.
Vorteilscard မိသားစုပိုင်ရှင်များအားလုံးသည် Vorteilscard ဂန္ထဝင်၏အခွင့်အရေးကိုနှစ်သက်ကြသည်. ဂန္အခွင့်အရေးအပြင်, Vorteilscard မိသားစုကဒ်ကိုင်ဆောင်သူနှစ် ဦး သည်မွေးကင်းစသို့မဟုတ်ကလေးနှင့်အတူခရီးသွားလျှင်အထူးလျှော့စျေးရရှိသည်.4Vorteilscard မိသားစုပိုင်ရှင်တစ် ဦး လျှင်ကလေးများသည်အထူးလျှော့စျေးရရှိမည်ဖြစ်သည် 100% စံတစ်ခုတည်းလက်မှတ်ပေါ်မှာ.
သူတို့ရဲ့ ၂၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်မီအထိ, ခရီးသည်များသည် Osterreichcard Jugend ကို ၀ ယ်နိုင်သည်. သင်၏အသက်ကိုအသက်အထောက်အထား ရှိ၍ ဓာတ်ပုံ ID ဖြင့်သက်သေပြနိုင်သည်.
သြစတြီးယားသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်မိသားစုထောက်ပံ့ကြေးကိုလက်ခံရရှိသည့်မွေးကင်းစကလေးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏မိဘအားလုံးသည် Osterreichcard Familie ကို ၀ ယ်နိုင်သည်. အကျိုးကျေးဇူးများသည် Osterreichcard ဂန္ထဝင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
ခရီးသည်များသည် Osterreichcard Classic ကို ၀ ယ်နိုင်သည်. တစ်ခု Osterreichcard ဂန္ထဝင်နှင့်အတူ, သူတို့တစ် ဦး လျှော့စျေးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 100% 1st နှင့် 2nd အတန်းအစားအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုကုန်ကျစရိတ်အပေါ်. Osterreichcard Classic 2nd Class နှင့်အတူ, မင်းလက်ခံတယ် 50% စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းလက်မှတ်နှင့်အတူ 2nd မှ 1st အတန်းအစားပြောင်းလဲမှုအပေါ်အထူးလျှော့စျေး.
အသက်ကြီးတဲ့သြစတြီးယားနိုင်ငံသားတွေခရီးသည်တွေ 63 နှင့်ကျော် Osterreichcard အကြီးတန်းဝယ်နိုင်သည်. အကျိုးကျေးဇူးများသည် Osterreichcard ဂန္ထဝင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏မသန်စွမ်းမှုလက်မှတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစစ်နှင့်ဆက်နွယ်သောမသန်စွမ်းမှုများတွင်အောက်ပါအချက်များပါ ၀ င်သည့်မသန်စွမ်းသူများသည် Osterreichcard Spezial ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။. အကျိုးကျေးဇူးများသည် Osterreichcard ဂန္ထဝင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
စိန့် Polten လက်မှတ်တွေ Linz
စိန့်ပိုလ်န်မှ Wiener Neustadt လက်မှတ်များ
Salzburg မှ Graz လက်မှတ်တွေ
ဘယ်လောက်ကြာ OBB ၏ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ?
ဒါဟာဒုတိယတိကျစွာပြောရန်ခက်ခဲသည်, သို့သော် Save Train သည်သင်၏ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီတစ်နာရီခန့်တွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးသည်. အကယ်၍ သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုစောစောစီးစီးပြီးစီးလျှင်, သင်၏ရထားခရီးစဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေစေရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများအတွက်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်.
SaveaTrain ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာမှအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေနိုင်သည်. သင်၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်လိုချင်သောနေရာကိုသာရိုက်ထည့်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသလိမ့်မယ်.
မည်သည့်ဘူတာများကို OBB မှတာဝန်ယူသည်?
OBB ၏ဗီယင်နာဘူတာမှာဗီယင်နာ Hauptbahnhof ဖြစ်သည် (ဗီယင်နာဘူတာရုံ), Sudtiroler Platz ဘေးတွင်ဗီယင်နာ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်.
Linz မှာ, ဒီနေ့ခေတ် OBB ရထား ထွက်ခွာခြင်းနှင့် Linz ဗဟိုဘူတာမှရောက်ရှိလာ (ဂျာမန်ရှိဗဟိုဘူတာသည် Hauptbahnhof နှင့်ညီသည်), ဒွိုက်မြစ်နှင့်မနီးမဝေး.
Salzburg ပင်မရထားဘူတာ (Salzburg ဗဟိုဘူတာ) သြစတြီးယား၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့အလယ်၌တည်ရှိသည် – Salzburg.
စက်ဘီးစီးခွင့် OBB ရထားများ?
သင်ဘူတာတွင်သူတို့အတွက်လက်မှတ်ဝယ်နေသမျှကာလပတ်လုံး OBB ရထားများပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခွင့်ပြုသည်. သူတို့ကစက်ဘီးတစ်စီးလျှင် ၂ ယူရိုကုန်ကျတယ်.
ကလေးများသည် OBB ရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့ခရီးသွားပါစေ?
ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်သာအချို့သောအသက်အရွယ်အထိ. ခြောက်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်အခမဲ့ခရီးသွားကြသည်.
ဟုတ်ကဲ့, သူတို့နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာနေကြသည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသေတ္တာသို့မဟုတ်အလားတူအမှုဖြင့်သယ်ဆောင်ရမည်.
အများဆုံးတောင်းဆိုထားသော OBB မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – OBB တွင်ထိုင်ခုံကြိုကြိုတင်မှာထားသလား?
သငျသညျ လုပ်နိုင် ဘိုရလား တစ်ဦး ငါသိတယ်တွင် ကြိုတင်ပြီး ပြည်တွင်းအပေါ် OBB ရထားများ3ယူရို. သငျသညျ လိမ့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုရယူပါ ထိုင်ခုံ ကြိုတင်မှာကြားထားအောင်ပြီးနောက်.
OBB တွင် WiFi အင်တာနက်ရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့. သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် OBB ရထားအားလုံးအတွက်အခမဲ့ WiFi အင်တာနက် သင် OBB လက်မှတ်ဝယ်သည့်အခါနှင့်အားလုံးခရီးသွားအတန်း (ဦး စားပေး SaveATrain.com အပေါ်).
သင်ဤအချက်မှဖတ်ပြီးပါပြီ, သင်၏ OBB ရထားများအကြောင်းသိထားရန်လိုအပ်ပြီးသင် OBB ရထားလက်မှတ်ကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည် တစ်ဦးကရထား Save
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.